माइक्रोसफ्टले सार्वजनिक गर्यो विन्डोज ११, नयाँ के के फिचर थपिए ? - Hamro Najar
माइक्रोसफ्टले सार्वजनिक गर्यो विन्डोज ११, नयाँ के के फिचर थपिए ?
प्रकाशित मिति: २०७८ अषाढ ११, शुक्रबार (११ महिना अघि)
नयाँ फिचरसहित विश्व बजारमा विन्डोज ११ सार्वजनिक भएको छ । माइक्रोसफ्टले विन्डोज टेन भन्दा फरक र आकर्षक रुपमा परिमार्जन गर्दै नयाँ विन्डोजलाई सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रयोगकर्ताले विन्डोज १०बाट विन्डोज ११मा निशुल्क अपग्रेड गर्न पाउने सुविधा समेत ल्याएको छ । यसअघि ७ बर्ष पुरानो विन्डोज टेन चल्दै आएको थियो ।
नयाँ के के फिचर थपिए ?
माइक्रोसफ्टले विन्डोज ११ मा सेन्ट्रलाइज्ड स्टार्ट मेन्यु गोलाकार बनाएको छ । त्यस्तै प्रयोगकर्तालाई फरक अनुभव गराउने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले स्न्याप ग्रुप समेत सार्वजनिक गरेको छ जहाँ एपहरुको संकलन गरेर राख्न सकिन्छ । विन्डोजमा डाईरेक्ट स्टोरेज प्रविधि,माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट एन्ड्रोइड एप डाउनलोड गर्न सकिने लागाएतका फिचर थपिएका छन् ।
कम्पनीले अगामी हप्ता प्रयोगकर्ताको लागि बेटा भर्सन प्रयोग गर्न दिने भएको छ । विन्डोज ११ मा मल्टिफ डिस्प्लेमा पनि एप चलाउन सकिने विशेषता ल्याएको छ । जहाँ ल्यापटपबाट एक्सटर्नल मनिटरलाई अफ गरे पनि सेकेण्डरी स्क्रीनका सबै एप मिनिमाइज मात्रै भएर बस्ने छन् ।
यसो हुँदा ल्यापटक बन्द हुँदा पनि ती एपहरु सोही अवस्थामा रहेका हुन्छन । माइक्रोसफ्टले १ हजार भन्दा बढी गेमहरुमा एचडीआर डिस्प्ले दिने पनि बताएको छ ।
संस्कृत-नेपाली-अंग्रेजी शब्दकोशको एप सार्वजनिक, यसरी गर्नुहोस् डाउनलोड